“” ထဘီနီနီ အရည်ရွှန်းနေပြီ “” – Grab Love Story
ကို့သဲလေးက ယူနီဖောင်းလေးနဲ့ လွလိုက္တာကြာ
ခါးတိုအင်္ကျီအဖြူ နီရဲရဲထဘီလေးနဲ့ ယဉ်ယဉ်လေးလှနေတဲ့ ချစ်သူလေးကို ကျနော် ကြည့်ငေးနေမိတယ်။
ပြီးတော့ ကုတင်စောင်းမှာ ထိုင်ရင်း ခါးကိုဆွဲဖက်လိုက်တော့ သက်စုခိုင် အသာရုန်းတယ်။
မလဲနဲ့ကွာ။ ဒီယူနီဖောင်းလေးနဲ့မှ ပိုလိုးကောင်းမှာ
ကို့ခ်စ်သူ သူနာပြုဆရာမလေးကို ယူနီဖောင်းဝတ်လေးနဲ့ ပိုလုပ်ချင်လို့
ဟွန်း အဝတ်တွေ ပေကုန်မှာပေါ့
ပြန်လျှော်ရင် စင်ပါတယ် သက်ရဲ့
ပြောရင်း ထဘီနီလေးပေါ်က ပေါင်သားအိအိကို လက်နဲ့ပွတ်သပ်ပေးနေလိုက်တယ်။
သက္စုက ခေါင်းပေါ်ဆောင်းထားတဲ့ ကဒ်အဖြူလေးကို ချွတ်ပြီး ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲ ခေါင်းလေးတိုးဝင်တယ်။ ထူပြည့်ပြည့် နီနုနု နှုတ်ခမ်းသားလေးကို ပြွတ်ခနဲ ကျနော် ငုံနမ်းစုပ်ယူလိုက်ရင်း ခါးလေးကို တင်းတင်းဖက်ထားလိုက်တယ်။
နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းစုပ်သံ တပြွတ်ပြွတ်နဲ့အတူ သက္စုရဲ့ ညည်းသံလေး။
အင်္ကျီပေါ်ကနေ နို့မို့မို့လေးကို အသာဆုပ်ညှစ်တော့
သက္စုလက္ကေလး ကျနော့်ပေါင်ကြားထဲ ဝင်လာတယ်။ တောင်မတ်နေတဲ့ ကျနော့်ဒုတ်ဟာ လက်နွေးနွေးလေးရဲ့ အထိတွေ့ကြောင့် ဒုံးပ်ံပမာ။
ပုဆိုးကို ချွတ်ပစ်လိုက်ပြီး ကျနော့်ဒုတ်ကို သက္စု ပွတ်သပ်ဆုပ်ညှစ်တယ်။ ကစ်ဆင်ဆွဲနေရင်းကနေ
ကြီးလိုက်တာကိုရယ်။ ဟိုတခါလောက် မကြမ်းနဲ့နော်။ သဲနာလို့
အင်းပါ။ ဒီခါ ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကောင်းကောင်း လိုးပေးမယ်
သက်စုထဘီနီလေးကို အပေါ်လှန်တင်ပီး ကျနော် ကိုယ်လုံးချင်းပူးကပ်လို့ ကုတင်ပေါ် လှဲချလိုက်တယ်။
ကျနော်နဲ့ သက္စုရဲ့ လိုးခန်းအကြောင်း မပြောခင် ပြောစရာတချို့ အရင်ပြောမယ်နော်။
သက္စုက ကျနော့်ထက် ငယ်တယ်။ သူနာပြုသင်တန်းဆင်းပြီး ဆေးရုံမှာ တာဝန္က်စ။ အသက္က ခုမွ ၂၃ နှစ်။
ကျနော်နဲ့ ရည်းစားဖြစ်တာ တစ်နှစ်ကျော်ပြီ။ ဒါပေမဲ့ နို့ကိုင် ဂွင်းထု တယောက်ပစ္စည်း တယောက် ကိုင်ဖူးရုံပဲ။ သက္စုကို လိုးခွင့်ရတာ ခုမွ ၃ကြိမ်မြောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ လူကြီးတွေ ခရီးသြားလို့ အိမ်မှာ ကျနော်တယောက်တည်း ရွိတဲ့ည သက္စုကို ခေါ်အိပ်တာ။
ပထမေတာ့ သူ မအိပ်ရဲဘူး ဘာညာ ငြင်းသေးတယ်။ တော်ကီပစ်ရတာပေါ့။ အဲဒီည အတူအိပ်ရင်း အောကားအတူကြည့်ပြီး အရလိုးလိုက္တာ။ ပါကင်လေးကို ဖြုတ်ခွင့်ရခဲ့တာ။
ကျနော် ကံကောင်းပါတယ်။ သက္စုက ကျနော်နဲ့မှ ရည်းစားဆိုတာကို သိတာ။ ကျနော်က သူ့အချစ်ဦးပေါ့။
ပထမဆုံး ယောက်ျားအထိအတွေ့တွေ သက္စု အတော်ဖြတ်သန်းလိုက်ရတယ်။ ဥပမာ နို့စကိုင် နှုတ်ခမ်းစစုပ်တုန်းကတို့၊ သူ့အဖုတ်ကို ကျနော် စကိုင်တုန်းကတို့။ လက်နဲ့ ပါကင်အဖုတ်မို့အိအိလေးကို စကစားပေးနေချိန်ကဆို နှုတ်ခမ်းကို အတင်းကိုက်ပီး အော်ညည်းတာ။ တော်သေး လူမရွိတဲ့ နေရာမှာမို့ပေါ့။
သက်စုလက်လေးထဲ ကျနော့်ဒုတ် ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ပထမအကြိမ်ကဆိုရင် တကိုယ္လုံး ဓာတ္လိုက်သလို တုန်နေတာ။ သူနာပြုတက်လို့ လိင်ကိစ္စ စာထဲသင်ရပေမဲ့ တကယ့်ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ စံချိန်မှီလီးတံကြီးကို ထိတွေ့လိုက်ရချိန်မှာ အပျိုစစ်စစ်လေးသက်စု ဘယ်ခံနိုင်မလဲ။ နောက်ပိုင်းတော့ လီးကို အရမ်းကြိုက်ပဲ။ အဖုတ်ထဲ မဝင်ဖူးခင်ကတည်းက ကျနော့်ဒုတ်ကို စွဲနေတာ။ ပထမဆုံး လီးစုပ်ခိုင်းတုန်းက မျက်ရည်ပါကျတယ်။
ကဲ ကျနော်တို့လိုးပွဲ စမယ်နော်။ တတိယအကြိမ်မြောက် သက်စုအဖုတ်ထဲ ကျနော့်လီးသွင်းခန်းပေါ့။
စောစောကပြောသလို ကုလင်ပေါ်လှဲအိပ်ပြီး တေယာက္ကို တယောက် နှူးဆွပေးနေရင်း အဖုတ်ဝထဲ အသာလေး ဒုတ္ကို ဖိသွင်းလိုက်တယ်။
ကျပ်စီးနေတဲ့ အဖုတ်ပေါက်လေးထဲ ကျနော့်လီး တဆုံးတိုးဝင်သွားတယ်။
အို ကျစ်ကျစ် ထိလိုက္တာ ကို့လီးကြီးကို ချစ်တယ်
သဲက ကို့ကိုချစ်တာလား ကို့လီးကို ချစ်တာလား
အဟင့် ကို့လီးကို ပိုချစ်တာကွယ်
ဖတ္ခနဲ ကျနော် ဆွဲဆောက်တယ်။
အို့ ကို ကို အဟင့်ဟင့်
အရင် ၂ခါ လိုးဖူးပေမဲ့ ခုလို ယူနီဖောင်းနဲ့ မဟုတ္ဘူး။ အိမ်နေဝတ်စားကို ချွတ်လိုးတာ။ ခု ကျနော် ပိုဖီးလာနေတယ်။ ချစ်သူစဖြစ်တည်းက တနေ့ကျရင် သက္စုကို ယူနီဖောင်းလေး ဝတ်ခိုင်းပီး လိုးမယ္လို့ ကြုံးဝါးထားတာလေ။ သက္စုရဲ့ တင်ကားကားလေး ထဘီနီလေးနဲ့ သိပ်ကြည့်ကောင်းတာကိုး။
ကျနော် ချစ်သူရဲ့ဖင်သားကို ထဘီကြားနှိုက်ပြီး ဆွဲညှစ်ရင်း လိုးတယ်။ အင်္ကျီကို နှိပ်သီးဆွဲဖြုတ်၊ ဘော်လီလှန်တင်ပြီး နို့ကို တပြွတ်ပြွတ် စို့တယ်။
ချစ်တယ်။ ဟင့် ဖြည်းဖြည်းလုပ်လို့
ကျနော် စိတ်ထပြီး အားပါသွားတယ်။
တချီးပြီးရင် လီးစုပ်ပေးနော် သက်
လှေကြီးထိုးနဲ့ပဲ တချီ ဆွဲလိုးနေမိတယ်။
သက္စုက တဟင့်ဟင့်နဲ့ သူချစ်တဲ့ ကျနော့်လီးအရသာကို ခံစားနေတယ်။
အဟင့်။ ကိုက ယူနီဖောင်းနဲ့ဆို ဘာလို့ ပိုကြိုက်တာလဲ
ဆွဲဆောင်မှုရှိလို့ပေါ့သဲရဲ့။ ကို သဲကို ယူနီဖောင်းလေးနဲ့ မြင်ရင် လီးပိုတောင်တာ
ထဘီနီလေးအောက်က အိုးလုံးလုံးလေးကို ပြေးညှစ်ချငိရော
ကိုမွမဟုတ္ဘူး။ ယောက်ျားအတော်များများ သဲတို့လို နာစ်လေးတွေကိုဆို အိုလိုးချင်တာ
နာစ်တွေက အပြုစုပိုကောင်းတာတဲ့။ ဒါထက္ကို နာစ်ယူနီဖောင်းလေးနဲ့ မိန်းမက လိင်စိတ်ပိုထစေတဲ့ ပုံစံလေးကိုးကွယ်
ပြောရင်း ဆွဲလိုးတယ်။ ပါးတွေကို နမ်းတယ်။ နို့သီးခေါင်းကို ဆွဲငုံတယ်။
အ။ အဟင့်ဟင့်။ ဆောင့်ကွာ
အားရပါးရ ကျနော် ဆွဲလိုးရင်း လေရေတြ တပစ်ပစ် ပန်းထွက်ကုန်တယ်။
အို ကိုပြီးသွားပီ။ ကောင်းလား
ပြီးအောင် လုပ်ပေးမှာပေါ့ သဲရဲ့
ကျနော်က လီးကို ဆွဲချွတ့်ပီး သက္စုကို ဖက်ထားလိုက်ရင်း ခနနားတယ်။
လက္က နို့စိုင်လေးတွေကို ကစားပေးနေတယ်။
သက္စုက နည်းနည်းပျော့သွားတဲ့ ကျနော့်လီးကို ပွတ်သပ်ကစားပေးနေရင်း
ဒါနဲ့လေ ယောက်ျားတွေက တကယ်ပဲ သူနာပြုဆရာမလေးတွေကို လိုးချင်ကြတာလား
တကယ်ပေါ့ သဲရဲ့။ ကိုဆို အခု ယူနီဖောင်းလေးနဲ့ လိုးရတာ သိပ်ကောင်း။ ငါ့ခ်စ်သူ နာစ်လေးပါလားလို့ တွေးလိုးတာ။ ဒါမို့ မြန်မြန်ပြီးသွားတာ
အဟင့် ဒါမို့ဟုတ်မယ်။ သဲ ဆေးရုံသွားရင် တချို့ယောက်ျားတွေ သဲကို ကြည့်တာ မျက်လုံးကျွတ်မတတ်ပဲ
ထူးဆန်းတယ်။ ကျနော် တမျိုးလေး ခံစားလိုက်ရတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူကို တခြားယောက်ျားတွေကြည့်တာ စိတ်တော့တိုသလိုလိုပဲ။ ဒါပေမဲ့ ခုလို လိုးနေချိန် ပြောတော့ ရင်ထဲ တမျိုးပဲ။
ဒီနေရာကိုလား လို့မေးရင်း သက္စု ဖင်သားနှစ်ဖက်လုံးကို လက်နှစိဖက်နဲ့ ဆုပ်နယ်လိုက်တယ်။
ကြည့်မှာပေါ့ ကို့ခ်စ်သူ ထဘီနီလေးနဲ့ အိုးကော့ကားကားလေးက လမ်းလျှောက်ရင် တုန်တုန်အိအိ ဘယ်ညာလှုပ်နေတာကို
ကြည့်ရင်း သက္ကို သူတို့လိုးချင်မှာပဲ။ ဒီနာစ်လေးကို လိုးလိုက်ရရင်တော့ကွာ တို့၊ ထဘီနီလေး လှန်တငိပြီး အိုးလေးထဲ လီးသွင်းရရင်တို့ မှန်းနေကြမှာ
အာ ကိုကလည်းနော်။ မဟုတ္တာ
တကယ်။ အဲ့တင်ပါးနှစ်ဖက်နားက စောက်ပတ်ကြီးကိုလည်း မြင်ယောင်ကြည့်ကြမှာ
ပြောရင်း ကျနော် စိတ်ထလာတယ်။ ဖတ္ဖူးတဲ့ အပြာစာတွေထဲက ကတ်ကိုး စိတ္ဆိုတာ ဒါမ်ားလား။ ကိုယ့်ချစ်သူ ကိုယ့်မိန်းမကို တခြားသူနဲ့ ပေးလိုးချင်တာမျိုး။ ကျတော်ကတော့ လက်တွေ့မှာ ပေးမလိုးချင်ပါဘူး။ စိတ်ကူးနဲ့ ဆိုရင်ကော။ ရင်ထဲ တလှပ်လှပ်ဖြစ်သွားတယ်။
သဲကို သဲနဲ့နီးစပ်တဲ့ ယောက်ျားတွေ မှနိးထုကြမှာပဲကွာ
ဟုတ်တယ်။ ကို့သဲက လိုးချင်စရာလေးကို။ ယောက်ျားတွေ ဂွင်းထုတဲ့အခါ သဲကို မှန်းမှာပေါ့
စိတ်ဆိုးမှာစိုးပေမယ့် သက္စု စိတ်မဆိုး။ စိတ်မဆိုးတဲ့အပြင် ကျနော့်ကို ပိုတိုးဖက္ကာ လီးကို တင်းတင်းဆုပ်တယ်။ ကျနော့်ဒုတ် ထောင်းခနဲ တောင်တက်လာတယ်။
သဲကို ဘယ်လိုမှန်းကြလဲ သိလား
ဥပမာ သဲ သူငယ်ချင်းတယောက်ယောက် ဂွင်းထုတဲ့အခါ သဲကို မှန်းတယ်ပေါ့။ သူက လက်နဲ့ လီးကို ကိုင်ထုရင်း စိတ္ကူးထဲ သဲကို လုံးတီးချွတ်လိုက်မယ်။ ပြီး သဲနို့လေးကို ညှစ်မယ်။ ပါးစပ်နဲ့စို့မယ်
ကျနော်ထင်တယ်။ သက္စု ဖီလ်းလာပုံရတယ်။ ဒါနဲ့ ပိုဖီလ်းအောင် သူ့အဖုတ်ကို လက်နဲ့ပွတ် အေစ့ကို လက်ကြားညှပ်ချေပေးရင်း ဆက်ပြောတယ်။
စိတ္ကူးထဲ သဲအဖုတ္ကို ခုလို ကိုင်ကစားမယ်
အစေ့လေးကို ကိုချေသလို သူချေနေမယ်
ပြီး သဲအဖုတ်ထဲ သူ့လီးကြီး ထိုးသွင်းပီး သက်စုရယ် သက်စုရယ် လို့ စိတ္က ရေရွတ်ပြီး သဲကို လိူးနေသလို ခံစား ဂွင်းတိုက်တာပေါ့
ကိုရယ်။ တမျိုးပဲ။ သဲ စိတ်လှုပ်ရှားလိုက်တာ။ အရင်က အဲဒါမျိုး မေတြးမိဖူး။ ကိုပြောမှ တွေးမိတော့တယ်
ကျနော် ပိုရင်ခုန်သွားတယ်။ သက္စုကို ကျနော် အဲဒီလို ခံစားစေချင်တာလေ။
သဲကို အဲ့လိုမှန်းပြီး စိတ်ကူးနဲ့ တက်လိူးနေကြတဲ့သူတွေ နည်းမှာမဟုတ်ဘူး
သက်စုအဖုတ်ထဲ ပန်းထည့်နေတယ်ဆိုပြီး လေရေတြ ပန်းထုတ်ကြတာလည်း မနည်းလောက်ဘူး
သဲ တွေးကြည့်စမ်း။ သဲ ပတ်ဝန်းကျငိမှာ သဲကို ဘယ်သူ မှန်းထုလောက်မလဲ
သက္စုက ခနစဉ်ူစားတယ်။ ပြီးတော့
ကို သိလား။ သဲ ခု တွေးမိပြီး ရင်အရမ်းခုန်လာတယ်။ သဲနဲ့ ဆယ်တန်းအတန်းတူ သူငယ်ချင်းတွေ သဲကို ကြိုက်တဲ့သူတွေ ရွိတယိ။ သဲပြန်မကြိုက်ခဲ့လို့။ သူတို့ရော သဲကို အဲ့လိုပဲ မှန်းမှာပေါ့နော်
အင်းပေါ့။ ဆယ်တန်းက ဂွင်းထုတတ်နေပီလေ သဲရ။ အဲ့ကတည်းက သဲကို မှန်းလိုးကြမှာပေါ့
လက္တဖက္က နို့ကို ကစားပေးတယ်။
သက္စု အတော်ဖီးလ်တက်လာမှန်း သိသာတယ်။ အသံလေးက လွိုက္ဖိုလို့။
သဲလေ ပြောပြမယ်ကိုရယ်။ ကိုစိတ္ဆိုးမလားပဲ။ သဲ ခုမှပြန်စဉ်းစားမိတာ။ သဲအကိုဝမ်းကွဲလေ။ နှစ်ဝမ်းကွဲလောက်တော့ တော်တယ်
ကိုတော့ သူ့ကို မသိဘူး။ ကိုသီဟထွန်းတဲ့။ သူ အိမ်လာချိန်မှာ သဲက ရေချိုးပီး အိမ်ခန်းထဲဝင် ထဘီလဲနေတာ။ သူ ဟိုဘက်ခန်းထဲ ဝင်ပြီး သဲထဘီလဲနေတာကို ခိုးကြည့်တာ။ သဲက အမှတ်မထင် မြင်တော့ သူ လွစ္ခနဲ ထွက်သွားတယ်။ သဲလည်း မသိမသာ နေလိုက်တယ်။ အဲ့ညေနက သူချောင်းတဲ့ နံရံအောက်မှာလေ ပစ်ချွဲချွဲနဲ့ ဘာအေရေတြလဲမသိဘူးလို့။ ခုမွ စဉ်းစားမိတာ
ဒါဆို ကိုသီဟထွန်းက သဲထဘီလဲနေတာ ခိုးကြည့်ပြီး ဂွင်းထုသွားတာပေါ့
သဲအကိုက သဲအဖုတ္ကို လိုးချင်နေတာပဲ အဲ့နေ့က သဲထဘီလဲတော့ နို့တွေ တင်ပါးတွေ ပေါင်တွေ တစွန်းတစ မြင်မှာ။ အဲ့တော့ ဂွင်းထုလိုက်တာပေါ့
သူ့လီးကြီး သဲအဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်ပြီး လိုးနေတယ်လို့ သူခံးစားပြီး ဂွင်းထုမှာပဲ။ ခဏခဏ
သက္စုလက္ကေလးက ကျနော့်လီးကို ဂွင်းတိုက်ပေးနေတယ်။
ကို သဲကို ဖီလ်းအသစ် ပေးမယ်။ မျက်လုံးမှိတ်
ကိုသီဟထွန်း လီးကို သဲမြင်ဖူုးလား
ကိုသီဟထွန်း လီးက အကြီးကြီးနေမှာပဲ
ကိုသီဟထွန်းက သဲကို လိုးချင်နေတာ။ သူ အာသာပြေအောင် သဲလ
ဟာ ကိုနော်။ မဟုတ္တာ
သက္စု မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လျက် အော်တယ်။
ဟင်အင်း။ ကိုနော်။ ဘာလို့ သူမ်ားဟာကို ပေးထုခိုင်းနေတာလဲ
သဲ စိတ်လှုပ်ရှားမှာ။ သိလား။ မယုံ စမ်းကြည့်
သူတောင် သူ့ညီမကို ဂွင်းထုမှန်းတာပဲ
ကဲပါ။ မျက်လုံးမှိတ်။ ခု သဲကို ကိုသီဟထွန်း ဖက်ထားတယ်
ပြောရင်း သူ့ကို အသာလေး ဖက်လိုက်တယ်။
သဲက ကိုသီဟထွန်း လီးကြီးကို ကိုင်လိုက်။ ပြီး ဂွင်းထုပေးလိုက်
သူ ပြောတဲ့အတိုင်းတော့ လုပ်တယ်။ ကနော့်လီးကို တရွရွဆုပ်ညှစ်တယ်။ ဂွင်းထုတယ်။
သူက သဲနို့လေးကို ငုံစို့မယ်
ပြောရင်း သက်စုနို့လေးကို ငုံပြီး လျှာနဲ့ကလိပေးလိုက်တယ်။ သက္စု တအီးအီး ညည်းတယ်။ တင်ပါးပါ ကြွတက်တယ်။ လက်ကလည်း ကျနော့်လီးကို ဆက်တိုက်ကြမ်းကြမ်း ထုပေးတယ်။
ကိုသီဟထွန်း လီးက ကြီးလားသဲ
ကို့လီးနဲ့ ဘယ်သူ ပိုကြီးလဲ
ကိုသီဟထွန်းလီးက ပိုကြီးတယ်။ အား အဟင့်ဟင့် ကိုရယ်။ ရင်တုန်တယ်
ကဲ ထ။ ကိုသီဟထွန်းကို လီးစုပ်ပေးလိုက်နော်
ကျနော် ထူပေးတယ်။ သက္စု ထထိုင်တယ်။ မ်က္လုံးမွိတ္ထားလို့ ပြောပြီး ကျနော့်လီးကို ပါးစပ္နား တေ့ပေးလိုက်တော့ သက္စု ဒစ်ဖျားလေးကို ငုံတဟ်။
အား ကောင်းလိုက်တာ ညီမလေးရယ်
သက္စုက ကျနော့်လီးဒစ်ကို တရွရွ စုပ်လိုက် လျှာလေးနဲ့ ကစားပေးလိုက် စုပ်နေတယ်။
မျက်လုံးလေး မွိတ္လို့ ခံစားရင်းပေါ့။
ကိုသီဟက သဲဆံပင်ကို ဆွဲပြီး သဲ လီးစုပ်ပေးနေတာကို ခံစားနေတယ်။ စုပ် ညီမ စုပ်
ကျနော် လရေပန်းထွက်ချက်လာတယ်။ ဒါနဲ့ ခဏရပ်ခိုင်းပြီး
သက္စုက ရေချိုးခန်းထဲ ဝငိသွားတယ်။ ရေသံကြားနေရတယ်။ ကျနော် သက်စုပြန်အလာကို ရင်တခုန်ခုန်နဲ့ စောင့်နေတယ်။
လာ သဲ။ အိပ္ခ်။ ပက်လက်လှန်ထား
သက္စု အိပ်ရာပေါ် ပက်လက်လှဲတယ်။
အလိုက်သင့်လေး ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ကားပေးတယ်။ အမွေးထူထူလေးနဲ့ ဖောင်းမို့ခုံးထစ်နေတဲ့ သက္စုရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးက လွတပတေလး။
မျက်လုံးမှိတ် ညီမ။ ကိုကြီး ညီမ စောက်ပတ်ကို မှုတ်ပေးချင်တယ်
ကျနော် သူ့ပေါင်ကြားထဲ နေရာယူပြီး အဖုတ်လေးကို မျက်နှာအပ်တယ်။
ခု သဲအကို ကိုသီဟ သဲေားက်ဖုတ်ကို စုပ်ပေးတော့မယ်
လျှာဖျားလေးနဲ့ အကွဲဖတ်လေးကို ထိုးဆွလိုက်တယ်။
ပလပ် ပလပ် ပြွတ်
ခု လျှက်နေတာ ကိုသီဟထွန်းနော်
အား အဟင့်ဟင့် အ အ အ
မိနစ်အတော်ကြာ ကျနော် လျှာစွမ်းပြလိုက်တာ သက္စု တွန့်တွန့်လူး အော်ဟစ်ညည်းညူနေတော့တာပဲ။ နှုတ်ကလည်း ကိုကြီးရယ် ကိုသီဟရယ် လျက်ပါ ဆိုပြီး တမ်းတလို့။
အတန်ကြာတော့မှ ကျနော် အမှုတ်ရပ်ပြီး နေရာယူတယ်။ လီးလည်း အစွမ်းကုန်တောင်နေပြီ။ သက္စု အဖုတ်ဝလေးကို လီးထိပ်တေ့လိုက်တယ်။ တင်ပါးကိုကိုင် လီးဖိသွင်းရင်း
ခု ကိုသီဟ ညီမကို လိုးတော့မယ်နော်
လိုးပါ လိုးပေးပါ ကိုကြီးသီဟရယ်။ သက္စုကို ကိုကြီးလီးကြီးနဲ့ လိုးပေးပါ
ကျတော့် လီးချောင်းပူပူကြီး သက်စုအဖုတ်ထဲ တဆုံးထိုးဖိသွင်းလိုက်တယ်။ စီးပိုင်ကျပ်ထုပ်နေဆဲ အဖုတ်လေးရဲ့ အတွင်းသားတွေက ကျနော့်လီးကို ဆွဲညှစ်တယ်။ ကျနော် ပြန်ဆွဲထုတ်ပြီးမှ ဆတ္ခနဲ ဆောက်သွင်းတယ်။
ကောင်းလိုက်တာ။ ခါတိုင်းထက် ပိုကောင်းတယ် ကိုရယ်
ကိုသီဟရဲ့ လီးအသစ်ကြီးနဲ့ကိုး။ ကြိုက်လား
ကြိုက်တယ်။ အ။ အဟင့်
သက္စု ဒူးလေးထောက်ပြီး တင်လေးကို ပင့်ကော့ပေးတယ်။ ထဘီနီလေးကို ကျနော် ဆွဲလှန်တင်လိုက်တယ်။ ဖြူဝင်းကားစွင့်နေတဲ့ သက်စုဖင်သားစိုင် အိစက်စက်ကြီးကို ဆွဲညှစ်ဖြဲလိုက်တယ်။
ကိုသီဟက ကုန်းထားတဲ့ ညီမကို နောက်ကနေ လိုးမယ်တဲ့
အင့် ဟင့်ဟင့် လိုးပါ လိုးပေးပါ
သက္စု အရမ်းဖီလ်းဖြစ်နေပြီ။ ကျနော်လည်း ပိုကောင်းနေတယ်။ ကုန်းထားတဲ့ ဖင်သားဖွေးဖွေးနှစ်ဖက်အလယ်ကြားက ပြူအစ်နေတဲ့ အဖုတ်နီရဲရဲလေး အဝကို လီးဒစ် ထိုးသွင်းရင်း
ကိုသီဟ ညီမလေးစောက်ဖုတ်ကို လီးထည့်ပြီနော်
တင်စိုင်ကို အားယူပြီး ကုန်းလျက်အနေအထား ဆောင့်လိုးပစ်တယ်။
အကိုဝမ်းကွဲရဲ့ လီးကြီးနဲ့ လိုးနေတယ်လို့ ခံစားအလိုးခံနေတဲ့ သက္စု အရသာမျိုးစုံ ခံစားနေရမှာ အမှန်ပါပဲ။
ကျနော်နဲ့ သက္စု အဲဒီညက အချီမနည်း လိုးဖြစ်ကြတယ်။ သူ့အကိုဝမ်းကွဲ ကိုသီဟထွန်း ပုံစံနဲ့ လိုးပေးတာကို သက္စု အတော်ခံစားလို့ကောင်းတယ်ထင်ရဲ့။
ခါတိုင်း လိုးတုန်းက အလြန္ဆုံးမွ ၃ချီပဲ။ ဒီတစ်ခါ ငါးချီလောက် နှစ်ယောက်စလုံး အပြီးလိုးလိုက်ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့စုံတွဲက အပေးအယူမျှတယ်။ အပြင်မှာ မတွေ့ဖြစ်ရင်လည်း ညအိပ်ခါနီးဖြစ်ဖြစ် နေ့ဘက် လူရှင်းရင်ဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းပြောရင်း ဖုန်းပေါ်ကလိုး လုပ်ကြတယ်။ ပထမေတာ့ ကျွန်တော်က လိုး၊ သူက ခံပေါ့။
အဲဒီညက ကိုသီဟထွန်းအဖြစ် စိတ်ကူးပြီး လိုးပေးပြီးနောက်ပိုင်း သက္စုက တခြားဘဲတစ်ပွေနဲ့ ပေးလုပ်ခိုင်းလေ ပိုဖီးလ်လေပဲ။ တစ္ခု ပြောဦးမယ်။ ကျနော့်သက်စုလေးက အဖုတ်အမှုတ်ခံရတာကို အသေကြိုက်တာ။ ကျနော် စပေးလိုက်တာလေ။ တစ်နေ့ ဖုန်း လိုးရင်း ပါးစပ်နဲ့ ပြောလိုးကြရင်း သက္စုက တခြားယောကျာ်းတယောက်ကို ပိုက်ဆံပေးငှားပြီး မှုတ်ခိုင်းလို့ရရင် ကောင်းမှာပဲနော် တဲ့။
ကျနော်က တစ်နေ့နေ့ ဖန်တီးပေးမယ်လို့ ပြောထားလိုက်တယ်။ လက်တွေ့မတော့ ဘယ္လြယ္မလဲ။ တဒင်္ဂကောင်းပေမယ့် နောက်ပိုင်းအရှုပ်အရှင်းတွေလည်း ရှိနိုင်တယ်လေ။ ဘာဖြစ်ဖြစ် တနေ့မှာ သဲကို ရအောင်ဖန်တီးပေးမယ်လို့တော့ ကတိပေးထားလိုက်တာပဲ။
နောက်တစ်ပတ်ကျော်လောက် ကျနော်တို့ မလိုးဖြစ်ဘူး။ ဖုန်းထဲ စကားနဲ့ လိုးကြရုံပဲ ရှိတယ်။ လိုးကြတိုင်းလည်း ကိုသီဟထွန်းလီးကြီးနဲ့ ဇာတ်လမ်းဆင် ပေးခံတာပဲ။ တစ်နေ့ သက္စု ကျနော့်ကို ပြန်ပြောပြတယ်။
သက်စုရေ၊ ညီမေလး။ ဒေါ်ဒေါ်တို့ မရှိကြဘူးလား
အသံနဲ့အတူ အိမ်ထဲဝင်လာတာက ကိုသီဟထွန်း။ ကိုသီဟထွန်းကို မြင်တာနဲ့ သက္စု ကြက်သီးဥလေးတွေ ထသွားမိတယ်။ ကိုနဲ့ လုပ်ကြတုန်းက ကိုသီဟထွန်းကို မှန်းစိတ်ကူးခဲ့တာတွေ ပြန်သတိရပြီး သက်စုရင်တုန်သွားတယ်။
အဖုတ်လေးလည်း ဆစ်ခနဲဖြစ်သွားသလိုလို။ ကိုသီဟထွန်းက အိမ်ထဲဝင်လာတယ်။ သက်စုထိုင်နေတဲ့ ဆိုဖာမွာ ဘေးချင်းကပ် ၀င်ထိုင်တယ်။ အသားချင်းမထိပေမယ့် သက္စု ရင်တဒိတ်ဒိတ်ခုန်သလိုပဲ။ လီးကြီး ကိုသီဟရဲ့ လီးကြီး။ အို ရွက္လိုက္တာ။ သက္စု အလိုလိုနေရင်း ရှိ့တို့ရှန့်တန့် ဖြစ်နေမိတယ်။
ဒီနေ့ ဂျူတီမရှိဘူးလား သက္စု
မရွိဘူး ကိုကြီး။ မနက်ဖြန်မှ သြားရမွာ။ ဒီနေ့ Off ရက်
အင်း။ ငါလည်း ခု ပျင်းတာနဲ့ လာလည်တာ
ကိုသီဟနဲ့ ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်း ပြောရင်း သက္စု နေရခက်လာတာနဲ့ အခန်းထဲ ၀င်ခဲ့တယ်။ အိမ်မှာ အမေရှိနေတော့ အမေထွက်လာပြီး ကိုသီဟနဲ့ စကားပြောနေကြတယ်။
သက္စု အခန်းထဲဝင် တံခါးပိတ်ပြီး အိပ်ရာထဲလှဲရင်း အတွေးတွေ အစုံပါပဲ။ ပေါင်ကြားထဲ လက်ထည့်ပြီး အဖုတ်နွေးနွေးလေးကို အုပ်ကိုင်ပွတ်သပ်နေမိတယ်။ စိတ်တွေလည်း အတော်လှုပ်ရှားလို့။ ကိုသီဟရဲ့ လီးကြီးနဲ့သာ အလိုးခံရရင်ဆိုတဲ့ အတွေးတွေက သက်စုရင်ကို ဗလောင်ဆူလာစေတယ်လေ။
သမီးရေ။ သက္စု .. မေမေ အပြင်ခဏသွားဖို့ အပြင်ထွက်လာဦးနော်
အတွေးတွေ ပြတ်သွားတယ်။ သက်ပြင်းလေးချပြီး အခန်းပြင်ထွက်တော့
သီဟေတာ့ ပျင်းပျင်းနဲ့ အိပ်ပျော်သွားပြီ။ ညက မအိပ္ထားရလို့တဲ့။ အိပ်ပါစေ
မေမေထွက်သွားတော့ ခြံတံခါးဆင်းပိတ်လိုက်တယ်။ ပြန်တက်လာတော့ ဆိုဖာပေါ် ပက်လက်အိပ်နေတဲ့ ကိုသီဟကို ရပ်ကြည့်နေမိတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုသီဟရဲ့ ပုဆိုးကြားက ဖုဖောင်းဖောင်း နေရာကိုပေါ့။ သက်စုကြည့်ရင်း ရင်တုန်လိုက်တာ။
အနားကပ်သွားမိတယ်။ ကိုသီဟကေတာ့ တခူးခူးနဲ့ ဟောက်တောင်နေသေး။ သက္စု စိတ်တွေ စုစည်းမရတော့ဘူး။ စိတ်ကူးနဲ့ အကြိမ်ကြိမ် အလိုးခံလာရတဲ့ ကိုသီဟရဲ့ လီးကြီး။ ဒီနေရာမှာပါလား။
သက္စု လက်လေးတစ်ဖက်ဟာ ကိုသီဟပေါင်ကြားက ဖုဖောင်းနေတဲ့ နေရာကို အသာတို့ထိ စမ်းကြည့်လိုက်တယ်။
လက်တွေ တဆတ္ဆတ္တုန္လို့။ ပျော့အိနွေးထွေးနေတဲ့ လိင်ချောင်းက သက္စုအဖုတ္ကို ယားယံလာစေတယ်။ အတွင်းခံ ၀တ်မထားတာမို့ လိင်တံပျော့ပျော့ကို ဖြဖြေလး စမ်းကိုင်ထားရင်း တံတွေးမျိုချနေရတယ်။ လက္တစ္ဖက္က အဖုတ္ကို ပွတ်နေမိရင်း။
လက်ကလေးနဲ့ အသာဆုပ်ထားချိန်မှာ ပျော့ခွေနေတဲ့ လိင်တံဟာ တဖြည်းဖြည်း မတ်တောင်လာတယ်။
ဟင့် အကြီးကြီးပဲ။ ကို့ဟာထက် ပိုကြီးတယ်
သက္စု ရင်ထဲ လှိုင်းထန်နေတယ်။ ပိုဆိုးတာက အကိုဖြစ်သူရဲ့ လီးကြီးကို ကိုင်ထားရတာမို့ ရင်ခုန်မှုက မြန်နေရောပဲ။ ကိုသီဟကေတာ့ အိပ်မောကျနေရှာတာ။ သက္စု ဖီးလ်တက်ပြီး လီးကို ကိုင်ထားတာတောင် မသိဘူး။ အိပ္မက္လိုလို ဖြစ်နေသလားပဲ။
တောင်မတ်နေတဲ့ လီးပူပူကြီးကို သက္စု အတန်ကြာ ဆုပ်ကိုင်ထားမိ တယ်။ အရမ်းလည်း မညှစ်ရဲဘူး။ နိုးသွားရင် ကိုယ်ကျိုးနည်းမှာ။ အသာဖြဖြေလးပဲ အရသာခံရင်းက ခေါင်းလေးကို ငုံ့ချလိုက်တယ်။ ဖူးအစ်နေတဲ့ ဒစ္ထိပ္ကို နှုတ်ခမ်းနဲ့ တ၀နမ်းရှိုက်ပစ်လိုက်တယ်။ လီးနံ့က တမျိုးပဲ။
သက္စု သက်ပြင်းချပြီး လီးကို လက်ထဲက လွှတ်လိုက်တယ်။ ဒါတောင် ပုဆိုးပေါ် ထောင်ပြီး မတ်နေတုန်း။ မမြင်ရပေမယ့် ပုဆိုးပေါ်က ဖောက်ထွက်နေတဲ့ လီးမတ်မတ်ကြီးကို သက္စု ငေးကြည့်ရင်း အဖုတ်လေးကို ပွတ်နေမိတယ်။ ပြီးတော့ ဘယ္လိုမွ မခံစားနိုင်တော့တဲ့အဆုံး ကို့ဆီ ဖုန်းခေါ်လိုက်တော့တယ်။
ကို ကိုအားလား သဲ အရမ်းဆာနေပြီကွယ်။ ဖုန်းနဲ့ပြောရင်း လိုးပေးပါတော့နော်
သဲ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ နေ့ခင်းကြီး
အိမ်မှာ လူမရှိတုန်း ဒီလိုကိုရေ။ သဲ အရမ်း ခံစားနေရပြီ။ မြန်မြန်လိုးပေးပါနော်
ကို့ရဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း လိငျကိစ် စကားလုံးတွေကို ခံစားနားဆင်ရင်း ကိုသီဟလီးကြီးကို မှန်းဆလို့ အိပ်ရာပေါ် ပက်လက်ကလေးနဲ့ သက်စုတစ်ယောက် လက်ချောင်းလေးကို ကစားရင်း အာသာဖြေတော့တယ်။
နူးညံ့စိုစွတ်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသား ပန်းလွှာနုလေးကို လက်ချောင်းနဲ့ ပြတ်သပ္ကစား၊ အေစ့ရဲရဲ မာမာလေးကို ပွတ်ချေ၊ တွင်းပေါက်ထဲ လက်ခလယ်လေး အသွင်းအထုတ်လုပ်ရင်း
ကိုကြီးသီဟရဲ့ လီးမာမာကြီး ငါ့စောက်ဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်လို့ အဟင့်ဟင့်၊ ငါ့ကို နမ်းရှုံ့ပေး၊ ငါ့နို့လေးတွေကို ကိုကြီးသီဟလက်နဲ့ ဆွဲညှစ်၊ အို ငါ့ကို ပေါင်လေးကားခိုင်းပြီး အဖုတ်လေးထဲ သူ့လီးကြီးနဲ့ အားကုန်ဆောင့်ပေးနေ အဟင့် ကိုကြီးသီဟရယ်၊ သက္စုကို အရမ်းလိုးပေးပါ၊ မညှာပါနဲ့၊ အဆုံးထိ ကြမ်းကြမ်းဆောင့်လိုးပေးပါနော်
စိတ္ကူးထဲ ကိုကြီးသီဟရဲ့ လိုးဆောင့်ချက်တွေကို မြင်ယောင်တွေးတော အရသာခံ မှိန်းမောရင်း .
သက္စု ပြောပြသော ဇာတ်လမ်းကို နားထောင်ရင်း ကျနော့်လီး အစွမ်းကုန် တောင်မတ်လာတယ်။ သက္စုကို ပြတော့ သက္စုက လက်ကလေးနဲ့ ဖွဖွကိုင်ဆုပ်ပေးတယ်။
အဲဒီနေ့က ဒီလိုလေး သဲကိုင်ထားတာပေါ့ ကိုရယ်။ ကိုကြီးသီဟ လီးကြီးလေ။ သဲ စကိုင်တုန်းက ပျော့ပျော့သေးသေးလေး။ ကိုင်ထားရင်းက တောင်တက်လာတာ ကို့ဟာထက် ပိုရှည်တယ်။ ပိုလည်း အလုံးကြီးတယ်၊ သဲ အဖုတ်လေး ကျဉ်ခနဲပဲကွယ်
အပေါ်ကနေ တက်ခွထိုင်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာ အဖုတ်ထဲ ထိုးထည့် လိုးလိုက်ပေါ့ သဲရာ
ခံချင်တာ ကိုရယ်။ မဖြစ်သင့်လို့သာ
သက္စု ခေါင်းလေးညိတ်တယ်။ ကျနော့်ပုခုံးပေါ် ခေါင်းမှီတယ်။ သက္စု မျက်လုံးတွေ ရီဝေနေတယ်။ ကျွန်နော် သက္စုကို ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်းလိုက်ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်းလေးကို ပြွတ်ခနဲ ဆွဲစုပ်ငုံပစ်လိုက်တယ်။
သက္စုက ထုံးစံအတိုင်း ခေါင်းဆောင်းကတ်လေးကို ဖြုတ်ပြီး စားပွဲပေါ်တင်တယ်။ ကျနော်က အင်္ကျီဖြူလေး အောက်က လုံးချွန်မို့တင်းနေတဲ့ ရင်သားတဖက်ကို ဖွဖွညှစ်ဆုပ်ပွတ်သပ်ပေးလိုက်တယ်။
သက္စု ကျနော့်လီးကို လက်နဲ့ဆုပ်ပြီး တချက်နှစ်ချက် ဂွင်းတိုက်ပေးတယ်။
ကျနော် ကုတင်ပေါ် ပက်လက်လှဲတယ်။ ပေါင်ကြားက ကောင်က မိုးပေါ်မတ်လို့။ ခ်စ်သူက ကျနော့်ဘေးမှာအသာဝင်ထိုင်တယ်။ နှုတ်ခမ်းနီနီဖူးဖူးလေးကို နည်းနည်းဟလိုက်ပြီး ခေါင်းလေးငုံ့ချလိုက်တယ်။ စိုစွတ်ပူနွေးနေတဲ့ နူးညံ့ညံ့နှုတ်ခမ်းအစုံဟာ လိင်တံတလျှောက် အရသာအပြည့် ပေးစွမ်းတယ်။
အာငွေ့နွေးနွေးလေးနဲ့အတူ ထိတွေ့ရွေ့လျားနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းသား။ လိင်ချောင်းကို ရစ်ပတ်လိုက်ပြီး အာခေါင်ထဲထိ ဆွဲငုံစူပ်ယူလိုက်တဲ့ အပြုစု။ တချက်တချက် ဒစ္ကို ဖြဲချပြီး ဒစ်ထိပ်ခေါင်းအောက်ခြေက ရသာဖုလေးတွေကို ထိထိမိမိထိုးဆွပွတ်တိုက်ပေးတဲ့ သက္စုရဲ့ လျှာဖျားလေးကြောင့် ကျနော် ကြွတက်အောင် အရသာခံစားရတယ်။
ပြွတ် ပြွတ် ရွှီး
စုပ်ပေးရင်းက ပါးစပ္ကေန လီးကို ခနချွတ်ပြီး ကျနော့်ကို သက်စုမေးတယ်။
ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်ဘူး သက်စုလေးရာ။ သိပ်ကောင်းတယ်။ ကို့အသဲလေးက သိပ်အပြုစုကောင်း
သက္စုက ချစ်စဖွယ်မျက်စောင်းလေးထိုးရင်း ဒုတ္ကို ပြန်ဆုပ်ကိုင်လို့ နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ ပြန်ငုံတယ်။
ပါးစပ်ထဲ ပြီးချင်တယ် သဲရယ်
ကျွန်တော် သက်စုပါးစပ်ထဲ ပြီးပစ်လိုက်ချင်တာမို့ တောင်းဆိုတယ်။ ခဏခဏစုပ်ပေးဖူးပေမဲ့ တခါမွ ပါးစပ်ထဲ မပြီးဖူးဘူး။
လုပ်ပါ သဲရယ် ကိုပြီးလိုက်ချင်လို့
ကိုနော်။ မလုပ်နဲ့ကွာ။ တမျိုးကြီး
သဲအတွက် အားရွိပါတယ္ကြ။ နော်
ဟင့်အင်းလို့။ ပြီးခါနီးပြောလေ ကိုရာ။ အပြင်မှာပဲ ထုတ်လိုက်ပါနော်
မရဘူး။ ဒီတခါတော့ ပေးပြီးကွာ။ နော် သဲလေး
ပြောရင်း ဆက်စုပ်တယ်။ ကျနော် ရအောင် စည်းရုံးလိုက်တော့လည်း နောက်ဆုံးမှာ ခေါင်းညိတ်လက်ခံပေးရှာပါတယ်။ ပူနွေးစိုစွတ်တဲ့ ခ်စ်သူရဲ့ အစုပ်အငုံ။
ဒါတင်မက သူနာပြုဝတ်စုံလေးနဲ့ ဆံထုံးလေးနဲ့ ခပ်ချောချော ခ်စ်သူ Nurse လေးက မျက်လုံးလေးစင်းလို့ ကိုယ့်လီးကို တယုတယစုပ်ပေးနေပုံကို ကြည့်လေ ကျနော် အရသာပိုရွိ ပိုကောင်းလာလေပါပဲ။ ဒူးထောက် ခေါင်းငုံ့စုပ်ပေးနေတာမို့ တင်စိုင်လေးက နောက်ကို ကော့ထားဟန်လေးနဲ့။ ခါးကျဉ်ကျဉ်လေးအောက်က ကော့စွင့်လုံးဝန်းနေတဲ့ ထဘီနီဖုံး တင်သားပြည့်ပြည့်ကို တပ်မက်စွာကြည့်ရင်း ဆန္ဒတွေ အတိုင်းမဲ့။
ချစ်သူ့ခေါင်းလေးကို ထိန်းကိုင်ထားပေးလိုက်တယ်။ ဆံထုံးလေးကို ဘယ်လက်နဲ့ဆုပ်ပြီး အားယူလိုက်တယ်။ အာခေါင်ထဲထိ ဒစ်ထိပ်ဝင်အောင် ဖိသွင်းလိုက်တော့ သက္စု အြတ္ခနဲ ဖြစ်သွားရှာရဲ့။
လှိုင်ထန်တဲ့ ရင်ခုန်နှုန်း၊ တဆစ်ဆစ် ပြေးလွှားနေတဲ့ ဆဲလ်တွေ၊ ရုန်းကြွလာတဲ့ ရမ္မက်၊ တဒုတ်ဒုတ် ခုန်နေတဲ့ သွေးကြောတွေက တဆင့်၊ သူနာပြုယူနီဖောင်းလေးနဲ့ ခ်စ်သူရဲ့ လီးကို အရသာခံ စုပ်ပေးနေတဲ့ သက္စုကို ကျနော် ပိုချစ်မြတ်နိးမိတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ ပူနွေးတဲ့ သုတ်ရည်ပြစ်တွေဟာ လိင်တံထိပ်ကနေ သက်စုပါးစပ်ထဲ ဒလေဟာ ပန်းထွက်ကုန်တော့တယ်။
ကျနော် သက်စုပါးစပ်လေးထဲက လီးကျွတ်ထွက်မသွားအောင် မျက်နှာလေးကို ထိန်းကိုင်ထားတယ်။ လေရေတြ တစက်မကျန်အောင် ညှစ်ထုတ်ပန်းထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှ ပါးစပ်ထဲကနေ လီးကို ချွတ်လိုက်တယ်။
မျိုချလိုက်လား သဲ “
တမျိုးကြီး ဘယ်လိုမှန်း မသိဘူး
ကိုရယ်။ ချစ်လွန်းလို့ ကို့အလိုလိုက်ခဲ့တာပါ
သက္စုက ပြောရင်း ကျနော့်ဘေး ဝင်လှဲအိပ်တယ်။ လက်မောင်းပေါ် ခေါင်းလေးမှီလို့ လက်ကလေးနဲ့ ကျွန်တော့်ကို သိုင်းဖက်ထားပေးတယ်။
ကျနော်တို့ ချစ်သူနှစ်ဦး စကားပြောဖြစ်တယ်။ ပြောနေရင်းက ကျနော့်လက်ဟာ သက်စုဖင်သားအိအိတွေကို တရစပ် ဆုပ်နယ်ပွတ်သပ်ပေးနေတယ်။
ထဘီနီလေးအောက်က အတွင်းခံကြိုးလေးကို စမ်းကိုင် ရင်း တဖြည်းဖြည်းချင်း အတွင်းခံကို ချွတ်ယူတယ်။ သက်စုလည်း ကူချွတ်ပေးတယ်။
နို့တွေကို နယ်ဖတ်ဆုပ်ညှစ်တယ်။ အတွင်းခံမရှိတော့တဲ့ အောက်ပိုင်းထဲ ထဘီကြား လက်ထည့်ပြီး အတွင်းပိုင်း အသားစိုင်တွေ အနှံ့ကို ခပ်ရွရွလေး လျှောက်ပွတ်သပ်နေတော့ သက္စု ညည်းသံလေး ထွက်လာတယ်။
ပေါက်တွင်းသားလေးတွေဆီ ပုရွက်ဆိတ်ပြေးသလို လျှောက်ကစားပေးတော့ ခ်စ်သူ ဘယ်နေနိုင်မလဲ။ စောက်ဖုတ်လေးကို အသာစမ်းလိုက်မိချိန်မှာတော့ တွင်းပေါက်ဝလေးမှာ အရည်တွေ စိုစွတ်နေပြီ။
ချစ်တယ် ကို အဟင့်ဟင့်
ထဘီလေးကို ကျနော် ခါးအထိ အသာ ပင့်တင်လိုက်တယ်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပဲ ဆွဲဖက်ပြီး ပေါက်တစ်ဖက်ကို အပေါ် မတင်လိုက်တယ်။
ပြန်မတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ လီးချောင်းကို ခပ်ဟဟဖြစ်နေတဲ့ အဖုတ်ဝလေးထဲ ပင့်ထိုးထည့်လိုက်တယ်။
အွန့် ဖြည်းဖြည်း ကို
သက္စု အဖုတ်လေးဟာလည်း အရည်ရွှဲနေပြီမို့ သိပ်ခက်ခက်ခဲခဲ မထည့်ရတော့ဘူး။ ခပ်ကြပ်ကြပ်ပေမဲ့ စးစေးပိုင်နူးညံ့နေတဲ့ စောက်ဖုတ်တွင်းထဲ ကျနော့်လီး တဆုံး တိုးဝင်သွားတယ်။
ကျနော် ပေါင်လေးကို မကိုင်အားယူပြီး ပင့်ထိုး လိုးဆောင့်ပေးလိုက်တယ်။
ဘော်လီချိတ်လေး ဖြုတ်ပေးတယ်။ အင်္ကျီနှိပ်သီးတွေ တထောက်ထောက်။
ရွှေဝါရောင် ဝင်းစက်အိဖွေးနေတဲ့ ရင်သားမို့လုံးလုံးလေးက်ို တဖက်ချင်းစီ ငုံတယ်။ စုပ်တယ်။ လျာလေးနဲ့ ကစားပေးတယ်။
အောက်ကနေလည်း ထိုးဆြ လိုးညှောငင့်ပေးနေမှု မလစ်ဟာအောင် အာရုံစိုက်ထားတယ်။ သက္စုရဲ့ တဟင့်ဟင့် ညည်းသံလေးရယ် အဖုတ်ထဲ လီးတိုးဝင်တိုးထွက် အသံတွေရယ် တဖတ်ဖတ် တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ပဲ။
အဲဒီအချိန် ကျနော် စိတ္တစ္ခု ဝင်လာတယ်။
ခုနေ ကိုသီဟ ဘေးမှာရှိနေရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ
ဘာလို့ ရှက်ရမလဲ သဲရဲ့။ ကိုသီဟက ဘေးမှာ ထိုင်ကြည့်ရင်း ဂွင်းထုချင်ထုပစေပေါ့
ကျွန်တော် အားနည်းနည်းထည့်ပြီး ပင့်ဆောက်လိုးပေးလိုက်တယ်။
သက္စု ပေါင်တံလေးကို ပိုဆွဲမတင်လိုက်တယ်။ ဖောင်းမို့နေတဲ့ အရည်ရွှဲရွှဲ စောက်ဖုတ်ဟာ ပိုပြဲဟသွားပြီး ကျနော့်လီးအဝင်အထွက် ပိုချောမွေ့သွားတယ်။
သဲ။ ကိုသီဟက ကြည့်ရုံနဲ့ အားမရေတာ့ဘူးတဲ့
ဟင့် ကိုရယ်။ သူက ဘာလုပ်နိုင်မှာမို့လဲ။ သဲအဖုတ္ကို ကိုလိုးနေတာလေ။ သဲအဖုတ်ထဲ ကို့လီးကြီး ဝင်နေတာလေ ကိုရယ် .. အ
စောက်ဖုတ်ထဲ ကို့လီးသွင်းနေပေမဲ့ ကိုသီဟလည်း သဲကို လိုးလို့ရပါတယ်
ဟော သူ သဲနောက်ဘက်မှာ ဝင်လှဲအိပ်ချလိုက်ပြီ
သက္စု နှုတ်ခမ်းလေး မပိတ်နိုင်ဘဲ တအအ တအင့်အင့် ညည်းညူနေတယ်။
ကိုသီဟက သဲနောက်ကနေ ခါးကို ဖက်တယ်
ပြီးတော့လေ သဲကို ကိုနဲ့အတူ ကိုသီဟ လိုးပေးတော့မှာ
အ ဘယ်လို ဘယ်လိုလဲကွာ
ကျွန်တော် သက်စုဖင်သားစိုင်ကို ပင့်ဖြဲလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ တံတွေးရွှဲအောင် ဆြတ္ထားတဲ့ လက်ခလယ်လေးကို သက္စုရဲ့ ခရေပွင့်လေးမှာ ပွတ်သုတ်ပေးရင်း
သဲရဲ့ နောက်ပေါက်လေးကို ကိုသီဟ လိုးမှာလေ။ အခု ကိုသီဟက သူ့လီးကြီးကို
သက္စု နောက်ပေါက်ဝမှာ တေ့လိုက်ပြီ
အား အဟင့်ဟင့် ကိုရေ တမျိုးကြီးကွာ
လက်နဲ့ အပြောသာ လှုပ်ရှားတယ် မထင်နဲ့။ စောက်ဖုတ်ကို လိုးပေးနေတဲ့ လီးအသွင်းအထုတ်လည်း အရှိန်မပျက်စေဘူး။ လက္ခလယ္ကို တံတွေးပြန်ဆွတ့်ပီး နောက်ပေါက်ဝလေးကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖိသွင်းလိုက်တယ်။
အမလေး ရှီး ကို . ကို . သဲ အ
သက္စု တကိုယ္လုံး တုန်နေတယ်။ လက်တွေက ကျနော့်ကို ကုတ်ခြစ်တယ်။
ကိုသီဟ လီးကြီး သဲနောက်ပေါက်ထဲ တိုးဝင်လာပြီ
ပြောရင်း လက်တဆစ် ဝင်အောင် မှန်မှန်သွင်းလိုက်တယ်။ ပြောသာပြောတာပါ။ လက်တောင် မနည်းထည့်ရတယ်။ လက်တဆစ်ဝင်သွားချိန်မှာ သက္စု ကတုန်ကရင်ဖြစ်နေရှာပြီ။ စိတ်အတော်လှုပ်ရှားနေမှန်း ခန့်မှန်းမျတယ်။ ကျနော်လည်း ဒီလို ပြောလုပ်နေချိန် ပိုအရသာ တွေ့နေတာလေ။ စအိုကြွက်သားတွေက ကျနော့် လက်ချောင်းကို ဆုပ်ယူဆွဲညှစ်နေတာ။
ကြည့်စမ်း သူ့ညီမလေးကို ကိုသီဟ လိုးနေပြီ။ စောက်ဖုတ်ကိုတောင်မဟုတ်ဘူး။ ဖင်ကို လိုးနေတာ
အီးဟီး ကိုရေ၊ အဟင့်
လက်နှစ်ဆစ်လောက် ဝင်တဲ့အထိ ထိုးသွင်းပြီးချိန်မှာ သက္စုဟာ အသက်ကိုတောင် မနည်းရှူနေရတော့တယ်။ ခံစားမွု အသစ်အဆန်းကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုဟာ အရှိန်မြင့်လွန်းနေမယ် ထင်ပါရဲ့။
ကျွတ်ကျွတ် ကိုလည်း ဆောက့်ကွာ
ကျွန်တော် သက်စုစောက်ဖုတ်လေးကို တဖြောင်းဖြောင်း ဆောက်တယ်။ ဆောက်ပေးရင်းကမှ နောက်ပေါက်ထဲ ထည့်ထားတဲ့ လက္ခလယ္ကို ခပ်ဖြည်းဖြည်း မှန်မှနိလေး အသွင်းအထုတ် လုပ်ပေးတယ်။ စအိုအတွင်းသားတွေကို ပွတ်တိုက်ထိုးဆွပေးတယ်။
ကောင်းလိုက်တာ ကိုရယ်။ ချစ်တယ်။ လိုးပါ အဟင့်ဟင့် သဲကို လိုးပါ
ကဲ ကဲ ရှေ့က ကို့လီးနဲ့ သဲစောက်ဖုတ်ကို လိုးနေတယ်။ နောက်ကလည်း ကိုသီဟလီးက သဲဖင်ပေါက်ကို လိုးနေတယ်နော်
ကြိုက်တယ် ကြိုက်တယ် ကို။ သဲ အရမ်း ကောင်းနေတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားတာ အရမိးပဲ။ ဟင့်
စောက်ဖုတ်နုနုလေးကို တရစပ္ထိုးဆြ လိုးနှက်ပေးနေတဲ့ ကျနော့်လီးအရသာကော စအိုပေါက်လေးထဲ ထိုးသွင်းဆွနှိုက်ပေးနေတဲ့ လက်ချောင်းရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ခံစားမှုကြောင့်ပါ ဆိုတော့ သက္စုခမ်ာ ကာမအရသာ အလြိးခံရတဲ့ အရသာကို ရသစုံ ခံစားနေရမဟ်ထင်တယ်။
စကားတောင် မပြောနိုင်တော့ဘဲ ကျနော် ပြုစုသမျှ အရသာခံစားနေတဲ့ ချစ်သူလေးကို ကျနော် အားရပါးရ လိုးရင်း လရေထွက်ချင်လာတယ်။
သက္စု အလိုက်သင့်လေး ကုန်းပေးတယ်။
ကျနော် ဆက်မလိုးခင် သေချာကြည့်သေးတယ်။ ကုတင်ပေါ်မှာ ယူနီဖောင်းလေးနဲ့ ထဘီနီလေး လှန်တင်ပြီး တင်သားတွေကို စွင့်နေအောင် ကော့ပေးထားတဲ့ သူနာပြုဆရာမလေးကို ကျနော် ပိုင်ထားရတာ ဘယ်လောက် ကံကောင်းလိုက်သလဲ။ ရုပ်ရည်လည်း ပြောစရာမရှိ၊ အပြုအစု အယုအယလည်း ကောင်း၊ စိတ္တူကိုယ္တူ အလိုးခံတတ်တဲ့ သက္စုကို ကျနော် သိပ္ခ်စ္တာပါပဲ။
ကျနော် နေရာယူလိုက်တယ်။ ချက်ချင်း မလိုးသေးဘဲ သက္စုရဲ့ တင်နှစ်မွှာကြားက ခရေပွင့်လေးကို ကျနော် ငေးနေမိတယ်။ ကြည့်ရင်း စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘူး။ ခရေပွင့်လေးကို လက်ထိပ်နဲ့ အသာပွတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဖင်သားနှစ်ဖက်ကို လက်နဲ့ ဆွဲဖြဲပြီး ကျနော့် မျက်နှာဟာ အဲဒီဖင်သား ဖွေးဖွေးနှစ်ဖက်အလယ်ကို အပ်သွားတယ်။
အို ကို ဘာလုပ်မလို့လဲ
သက်လေးကို အရသာသစ် ပေးမလို့ ငြိမ်ငြိမ်နေ
စူတူတူ ခရေပွင့်လေးကို ကျနော် လျှာနဲ့ သပ်တင်လိုက်တယ်။
အီး ကိုရေ ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ
ကျနော် ပြန်မပြောတော့ဘဲ ခ်စ်သူရဲ့ ခရေပွင့်လေးကို ရသလောက်ဖြဲပြီး လျှာထိပ်ကို ထိုးထိုးထည့်တယ်။ အဝေလးကို လျှာနဲ့ ပတ်မွှေကစားတယ်။
ရွှီး သဲကို သတ်နေတာလား ကိုရယ်။ အ အ
နေမရတော့ဘူးကို။ အဟင့်ဟင့် သဲ ဒူးတွေ ခွေကျတော့မယ်
တရစပ်ပဲ ကျနော့်လျှာကို အလုပ်ပေးနေမိတယ်။
တော်ပါတော့ ကိုရယ် တော်ပါတော့ အ အ
ခရေပွင့်လေး တံတွေးတွေ စိုစိုရွှဲလို့။ ကျနော် ဒူးထောက်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ လီးပေါ် တံတွေးတွေ ရွှဲနေအောင် သုတ်ချလိုက်တယ်။ ပြီးတာနဲ့ ဖင်သားကို အားပါးရ ဆုပ်ကိုင် ဖြဲလိုက်ရင်း
ကော့ထား သဲ။ ရသလောက် ကော့ထား
သက္စုက ပြောတဲ့အတိုင်း ပိုကော့ပေးတယ်။
ကျနော် တယမ်းယမ်းနဲ့ အရည်တရွှဲရွှဲ လီးချောင်းကို သက္စု ခရေပွင့်အဝမှာ တေ့လိုက်တယ်။
ကို အပေါက်လွဲနေ အင့် အို
ကျနော့်စိတ် သိပ်ထန်နေပြီ။ လီးဒစ္ကို အဝမွာ အသာတေ့ပြီးတာနဲ့ ဖိသွင်းပစ်လိုက်တယ်။ လီးမှာရော စအိုမွာပါ တံတွေးတွေ ရွှဲရွှဲစိုနေတာကြောင့် လီးထိပ်ဟာ လျှောခနဲ ထောင်ူခနဲ စအိုပေါက်ကျဉ်းထဲ တိုးဝင်သွားတယ်။
အား အိ သေပါပြီ
ကျနော် သက္စု ဖင်သားကို လက်တဖက်ကိုင် လီးကို ကျွတ်မထွကိအောင် လက်တဖက်ထိန်းပြီး ဆက်ထိုးသွင်းလိုက်တဟ်။ သက္စု ရုန်းတဟ်။ ကျနော် ဖိချုပ်ထားတယ်၊။
ကို ပြန်ထုတ် သဲ မခံနိုင်ဘူး အ
အခု လိုးနေတာ နင့်ရည်းစား မဟုတ္ဘူး။ ငါ သီဟပဲ သက္စု။ နင့်ဖင်ကို ငါ့လီးကြီး ထည့်လိုးပေးမယ် ကဲ
အား အဟင့်ဟင့် နာတယ်
ကျနော့် လီးတံ သက်စုခရေပေါက်ထဲ တဝက်ကျော် တရစပ် တိုးဝင်သွားချိန်မှာ သက္စု တအားအား အော်ဟစ်တယ်။ ကျနော်လဘ်း သိပ်မကြမ်းပါဘူး။ ကျဉ်းကျပ်တဲ့ သက်စုဖင်ပေါက်လေးဟာ ကျနော့်လီးကို ကြောက်ကြောက်နဲ့ ဆွဲညှစ်ထားတာကိုး။
ငါ့လီးကို ကြိုက်လား သက္စု
ကြိုက် ကြိုက်တဟ် ။ ဖြည်းဖြည်းနော် ကို သဲနာတဟ်
ကို မဟုတ္ဘူး။ နင့်အကို ကိုသီဟ နင့်ကို ဖင်ကုန်းခိုင်းပြီး လိုးနေတာ။ ဖင်လိုးနေတာ
ပြောရင်း ခပ်ဖြည်းဖြည်း မှန်မှန် သွင်းလိုက် ထုတ်လိုက်။
သက္စုခမ်ာ အံကြိတ်ညည်းညူရင်း ကျနော့်လီးနဲ့ အလိုးခံနေရတဲ့ ဖင်ပါကင်ဖွင့်ခန်းကို သူ့အကို ကိုသီဟ အမှတ်နဲ့ ခံစားလို့
ဖွတ် ဖွတ် ပလွပ်
ကျနော် စိတ်ပိုပြင်းထန်လာတယ်။ ကုန်းနေတဲ့ ကော့စွင့်စွင့် ဖင်သားစိုင် ဖြူဖွေးဖွေး ကားကားအစုံကို လက်ဝါးနဲ့ ဖြန်းခနဲ ရိုက်လိုက်တယ်။
ရိုက်လိုက် လိုးလိုက်နဲ့ လရေတွေလည်း ထိန်းမရတော့ဘဲ ပန်းထွက်သွားတယ်။ ကျနော် သက်စုအပေါ် ထပ်မှီလဲချပြီး ဖင်ပေါက်ထဲ လီးကို တဆုံး စိမ်ထည့်ထားပြီး လေရေတြကို အကုန်အစင် ညှစ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။
အတန်ကြာထိ လီးကို မချွတ်သေးဘဲ ဖင်ထဲ ထိုးစိမ်ထည့်ထားရင်း သက္စုကို ဖက္လို့ အမောဖြေနေရတယ်။
ဆယ်မိနစ်လောက် ကြာမှ သက္စုက
မျက်စောင်းလေး ထိုးပြီး လှည့်မေးတယ်။
ကျနော် ပါးလေးကို တရွှတ်ရွှတ်နမ်းရင်း ခေါင်းညိတ်လိုက်တယ်။
လီးက ပျော့သွားပြီ။ သက်စုဖင်ပေါက်ထဲကနေ ပလြတ္ခနဲ ပြန်ထွက်လာတယ်။
အဲလို ဆိုးပေးတာကိုပဲ သက်စုလေး ခ်စ္တာ မလား။ ခပ္ဆိုးဆိုး လီးနဲ့လိုးပေးတာကို ပိုကြိုက်တယ်မလား”
ကျနော်က သက္စုရဲ့ အဖုတ်နဲ့ ခေရကို လက်နဲ့ ထိကိုင်ပြလိုက်တော့
ဟွန်း သူမ်ားကို နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး အရမ်းလိုးကြပြီးမှ
ဟောဗျာ။ ကို့ချစ်သူလေးကို ခ်စ္လို့ အရသာစုံ ပေးစွမ်းနေတာပါကွာ
အဲ့လိုကျပ်ကျပ်လုပ်။ တျခားသူ လီးတွေကိုပါ ကြိုက်သွားမိမှာနော်
ကြိုက်ပေါ့။ ကိုက ဖြည့်ဆည်းပေးမှာ
တကယ်။ တနေ့ ကိုတို့ လက်ထပ်ပြီးလို့ ကိုလိုးလို့ ဝရင် သဲအဖုတ်လေးကို တခြားလီးနဲ့ ပေးခံစားမယ်။ ခုနလို ယောက်ျား၂ယောက် ပူးလိုးတဲ့ ဖီလ်းလေးလည်း ပေးမယ် မိန်းမရယ်
သက္စု ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲ ပြန်တိုးဝင်လာတယ်။
လက်ချောင်းလေးတွေက ပျော့ခွေနေလေတဲ့ ကျနော့်လီးကို အသာဆုပ်ကိုင်လိုက်တယ်။ တယုတယ ဆုပ်ကိုင်လိုက်တဲ့ ချစ်သူ့လက်နုနုလေးတွေ အထိအတွေ့ကြောင့် မကြာခင် ကျနော့်ကောင် ပြန်ထောင်မတ်လာတော့မယ်။ ဒီအခါ သက္စုကို နောက်ထပ်ရသတမျိုးနဲ့ ပြီးအောင် လိုးပေးဖို့ ကျနော့်တာဝန်။ ။
ထူးတော့ထူးတယ်သိလား ””’ ( စ / ဆုံး )